Soomaalidii ugu badnayd oo caan ah oo dhimatay sanadkii 2020-kii | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Soomaalidii ugu badnayd oo caan ah oo dhimatay sanadkii 2020-kii
Soomaalidii ugu badnayd oo caan ah oo dhimatay sanadkii 2020-kii
(Hadalsame) 01 Jan 2021 – Iyadoo uu dhamaaday sanadka 2020-ka oo uu dunida saameyn ba’an ku yeeshay xanuunka coronavirus, waxaa gudaha Soomaaliya iyo meelo kale oo adduunka ka tirsanba ku geeriyooday Soomali badan oo caan ahaa. Waxaan dib u milicsaneynaa Allaha u naxariistee qaar ka mid ah dadkaasi oo u dhintay xanuunka Covid19.
Abriil, Nuur Cadde
Nuur Cadde wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho 2-dii Febraayo 1938-kii. Waxaa lagu xusuustaa kaalintii uu ka qaatay shirweynihii dib u heshiisiinta Jabuuti ee sanadkii 2009-kii ee lagu dhisay dowladdii wadaagga aheyd ee uu qaybta ka ahaa isbahaysigii dib u xoreynta ee fadhigiisu ahaa magaalada Casmara ee dalka Eritrea.
Wuxuu ahaa madaxa xiriirka dibadda iyo suuqeynta ee xiriirka kubadda koleyga Soomaaliya. Waxaa kale oo uu xubin ka ahaa xiriirka ciyaaraha basketball-ka Afrika.
Sebtembar, Cabdulqaadir Mursal
Oktoobar, Cali Khaliif Galaydh
Mas’uuliyiinta Dowlad Deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in baaritaan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Cali uu u dhintay fayraska korona. Hase yeeshee, ehellada marxuumka ayaa codsaday in dib loo baaro waxa geeridiisa sababay.
Cali Khaliif wuxuu door weyn kasoo ciyaaray siyaasadda Soomaaliya, tobannaankii sano ee lasoo dhaafay. Dhowr sano kaddib markii ay Soomaaliya xorriyadda qaadatay ayuu si weyn uga soo dhex muuqday saaxada siyaasadda.
1980-kii ilaa 1982-kii wuxuu soo ahaa Wasiirkii Warshadaha ee dowladdii kacaanka, oo uu madaxweyne ka ahaa – Alle ha u naxariistee -Maxamed Siyaad Barre. Ka hor inta aan loo magacaabin xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, sanadkii 2000, wuxuu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaankii lagu yagleelay shirkii Carta.
13 bilood markii ay dhisneyd xukuumaddii uu Ra’iisul Wasaaraha ka ahaa, xildhibaannada baarlamaanka ee xilligaas ayaa kala noqday codka kalsoonida. 20-kii bishii August ee sanadkii 2012-kii, Cali Khaliif wuxuu ka mid ahaa xildhibaannadii loo doortay baarlamaanka federaalka Soomaaliya, oo uu ilaa hadda ka mid ahaa ka hor geeridiisa.
Diseembar, Cabdi Cali Bacalwaan
Wararka qaar ayaa sheegaya in fannaanku uu qabay xanuunnada neefmareenka ku dhaca isla markaana uu u biirsaday xanuunka safmarka ah ee covid-19. Cabdi cali Bacalwaan ayaa ka mid ahaa tiirarkii kooxda qaranka ee Hoballada Waabari.
Mar uu wareysi siinayay mid ka mid ah warbaahinta, sanadkii hore ayaa wuxuu yiri “Qaran dumay qalfoofkii ka haray inaan ahay” ayaan dareemaa markaan soo xusuusto heerkii uu fanku gaaray”.
Previous articleSarkaal sare oo QM ka tirsan ayaa Somalia ku daray liiska 10-ka talis ee ugu xun (Xil sare oo ay Somalia berri ka qabanayso QM)
Next articleSAWIRRO: Turkiga oo soo saaray hannaan kacaamin doona sida loo baaro Covid-19 (Waxaa la adeegsanayaa Tiknolojiyadda Nano)